१४ औं सामसङ डिजिटल प्लाजा बुटवलमा ! « GDP Nepal
Published On : 15 June, 2019 9:00 am
बुटवल । सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सको आधिकारीक बितरक हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि. को सहकार्यमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न १४ औं सामसङ डिजिटल प्लाजा बुटवलमा बिहीबारदेखि शुभारम्भ भएको छ ।
यो सामसङ डिजिटल प्लाजाले सामसङका विश्वस्तरीय उत्पादनहरु टि.भि., मोवाइललगायतका सामसङका सामानहरु प्रदर्शन तथा बिक्री वितरण गर्नेछ ।
सामसङ डिजिटल प्लाजा उद्घाटन गर्दै हिम इलेक्ट्रोनिक्सकी निर्देशक सीमा गोल्छा
बजारमा उच्च स्तरीय सामसङका सामानहरुको बढ्दो मागले गर्दा बुटवलमा नयाँ शो–रुम खोल्न हिम इलेक्ट्रोनिक्सले भगवती मल्टि सप्लायर्ससँग सहकार्य गरेको हो ।
नयाँ शोरुम उद्घाटनको अवसरमा भगवती मल्टि सप्लायर्सका प्रोप्राइटर शिखर थापा र सपन पाण्डेयले भने– हामी विश्वकै अग्रणी ग्लोवल ब्राण्डसँग जोडिन पाएकोमा र यहाँ सुरुवातमै ग्राहकहरुले दिनुभएको प्रतिक्रियाले हामी हर्षित भएका छौँ ।
बुटवलकोे व्यस्त बजारमा खुलेको नयाँ शो–रुमबाट ग्राहक महानुभावहरुले नयाँ अनुभव गर्ने र आफुहरुले राम्रो ग्राहक सेवा दिने प्रतिबद्धता उनीहरुको छ । दुबै प्रोपराइटरहरु भन्छन्– हामीले दिने सेवाले बुटवल र बुटवललाई व्यवसायीक केन्द्र बनाउनुहुने ग्राहकको हृदय जित्ने कुरामा विश्वस्त छौँ ।
निगमको जापान उडान ‘गुलजार’, यात्रु चापले सातामा फेरि तीन उडान
काठमाडौं।नेपाल वायुसेवा निगमको जापानको ओसाका उडानमा यात्रुकोचापबढेकोछ। नेपालीहरूको मुख्य चाडपर्वहरू दसैं तिहार र छठ सुरु भएसँगै यात्रु चाप बढेको हो । काठमाडौं–ओसाका–काठमाडौं उडानमा यात्रुको चाप बढेको निगमले जनाएको छ। नेपालमा पर्यटकीय सिजन सुरु भएकोर चाडवाडमा नेपालीहरु आउने क्रम बढेसँगै निगमको उडानमा यात्रुको चाप भएको निगमका सहायक प्रवक्ता सुलेखमिश्रले बताए। भदौ१२ बाट ओसाका उडान थालेको निगमले यात्रु कम भएसँगै साप्ताहिक उडान कटौती गर्दै हप्तामा दुईउडान थालको थियो।
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले अन्ततः फोरजी सेवा विस्तार गरेको छ ।
‘फोन पे’ले बनायो ५० हजार मर्चेन्ट, ल्यायो ‘दसैं-तिहार, क्युआरबाट व्यापार’ अफर !
काठमाडौं । नेपालको पहिलो फोन–पेले ५० हजार मर्चेन्ट बनाउन सफल भएको छ । फोनपेमा विभिन्न